Michael Jackson, Eze Pop Las Vegas ịlọghachi ọzọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Michael Jackson, Eze Pop Las Vegas ịlọghachi ọzọ
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ejiji • LGBTQ • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ihe egwu egwu Michael Jackson 2021
Michael Jackson, Eze Pop gaara abụ afọ 63 na Sọnde. Nke a bụ nnukwu ohere ịpụta ọzọ na Las Vegas na Cirque du Soleil.
N'ịbụ onye akpọrọ "Eze nke Pop", a na -ahụta ya dị ka otu n'ime ndị ama ama ọdịbendị kachasị mkpa na narị afọ nke 20. N'ime ọrụ afọ iri anọ, onyinye ya na egwu, ịgba egwu na ejiji, yana ndụ nke ọha ọhaneze, mere ka ọ bụrụ onye ama ama n'ụwa niile na omenaala ama ama.
Ọ dị ya ka Michael Jackson gara oriri nke ya mgbe Cirque du Soleil na mmekorita ya na The Estate of Michael Jackson mere emume ncheta ọmụmụ "King of Pops". Michael Jackson gaara abụ afọ 63.
Ememme ngwụcha ụbọchị ọmụmụ bidoro na Satọde, Ọgọst 28, na #MyMJMoves ịma aka ịgba egwu, nke onye ode akwụkwọ na onye ntụzi maka Michael Jackson ONE, Jamie King kpere, wee gosi ndị na -agụ egwu, Rich na Tone Talauega.
Na Sọnde, Ọgọstụ 29, 2021 ndị bịaranụ nwere ike izute onye nrụpụta uwe ogologo oge nke Michael Jackson na onye edemede nke "Eze nke Style: Dressing Michael Jackson," Michael Bush na mbinye aka n'akwụkwọ.
Ememe ụbọchị ahụ gosipụtara Q&A pụrụ iche ya na onye isi ama ama na onye na -agụ egwu, Kenny Ortega, iji na -akwado ncheta afọ 25 na -abịanụ nke "HIStory World Tour," nke bidoro na Septemba 7, 1996.
Ndị otu Michael Jackson ONE otu egwuregwu, Travis Payne, Jamie King, Rich na Tone, sonyeere Ortega na ogbo, ndị ha na Kenny Ortega na Michael Jackson rụkọrọ ọrụ. Ime ngosi dị ịtụnanya bụ onye na -egwu egwu Michael afọ iri atọ, Jonathan “Sugarfoot” Moffett, onye sonyeere ndị otu n'ịkekọrịta oge echefu echefu na mkpali nke iso Michael rụọ ọrụ.
Ndị bịara na ịnụ ụtọ ihe n'ehihie bụ nwa Michael nwa nwoke tinyere ọtụtụ ụmụ nwanne nna ya na ndị ezinụlọ ya. Ihe omume ụbọchị mechiri onye ọ bụla, gụnyere nwa nwoke Michael nke nta, Bigi, sonyere nwanne ya nwoke na ndị ezinụlọ ndị ọzọ na ndị na-ege ntị na-ere maka arụmọrụ ike dị elu nke Michael Jackson ONE. Ndị ji tiketi maka ihe ngosi a nwekwara ohere izute ndị nnọchi anya Michael Jackson, gụnyere ndị sonyere na mmemme ehihie.
Ụgbọ elu KLM ọhụrụ si Amsterdam na Barbados